ဘက်ထရီပမာဏ 4900 mAh အထိ ပါဝင်မယ့် တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်း Blu Energy X Plus 2
251 Views Home NEWS Local HOW TO FEATURES Knowledge Interview Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Random Download Android iOS Window FUNNY PHOTOS HUBS Android Apple Samsung Android HUBS Mobiles & Tablets NEWSဘက်ထရီပမာဏ 4900 mAh အထိ ပါဝင်မယ့် တန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်း Blu Energy X Plus2U Min Thant Oct 19, 20160251
တန်ဖိုးနည်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ Blu ဟာ ယခုအခါ Energy စီးရီးနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် Android ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ Blu Energy X Plus2မော်ဒယ်ဟာ မနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Energy X Plus လိုမျိုးပဲ တန်ဖိုးသင့်ပြီး ဘက်ထရီပမာဏကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပြင် တခြား လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်ကောင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။Blu ဟန်းဆက်အသစ်မျာ 4900 mAh ပါဝင်ပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့အဆိုအရ သာမန်အသုံးပြုမှုတွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ၃ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘက်ထရီကို အားအမြန်သွင်းနည်းပညာအသုံးပြုထားပြီး Energy X Plus2ရဲ့ အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၅.၅လက်မအရွယ်၊ 720 x 1280 pixles ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Blu Energy X Plus2ဟာ Quad-core MediaTek MTK6580 Processor ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ RAM ပမာဏကတော့ 1GB ဖြစ်ပြီး 8GB Internal Memory ပါဝင်ပါတယ်။ SD ကတ်လည်း ထပ်စိုက်နိုင်ပါတယ်။ 8MP ရှိတဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာနဲ့၊ 5MP ရှေ့မျက်နှာကင်မရာတွေကို တပ်ဆင်ထားပြီး LED flash, Dual SIM နဲ့ HSPA connectivity တို့ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Blu Energy X Plus2ဟာ Android 6.0 Marshmallow နဲ့အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး Android 7.0 Nougat ကို Update လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကို လက်ရှိမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး Amazon ကနေရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၀၇ဒေါ်လာ ရှိမှာဖြစ်ပြီး အရောင်အနေနဲ့ အနက်၊ ရွှေနဲ့ Rose Gold ဆိုပြီး အရောင်သုံးမျိုးရရှိနိုင်မှာပါ။
Facebook Comments MOBILES
About U Min Thant U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone. View all posts by U Min Thant Previous article၁၉၃၁ခုနှစ်ရဲ့ ဒီနေ့မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေရဲ့ ဖခင်ကြီး Thomas Edison ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်
Next article၁၉၉ ဒေါ်လာတန် Chromebook အသစ်ကို Acer မိတ်ဆက်